के ‘भैरवी'बाट प्रदिप बाहिरिन्छन त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityके ‘भैरवी’बाट प्रदिप बाहिरिन्छन त ?
September 24, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेमेन्ट- कलिउड फिल्म उधोगमा सर्वाधिक रुचायिएका अभिनेता अन्तरगतका एक अभिनेता हुन् प्रदिप खड्का । फिल्म क्षेत्रमा उनको क्रेज दिनदिनै बढिरहेको जो कोहिले पनि देख्न सक्छ । उनलाई लिएर हरेक निर्माता फिल्म बनाउन चाहान्छन् ।
यसैक्रममा झन्डै १ वर्ष अगाडि अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘कृ’का निर्माता सुबास गिरीले ‘भैरवी’ बनाउने र दिनेश राउतको निर्देशनमा लिड हिरोका रुपमा प्रदीप खड्का र उनको अपोजिटमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह हुने झन्डै पक्का जस्तै भएको थियो ।
पछि फिल्म ‘कायरा’ गर्नुपर्ने भएकाले साम्राज्ञीले उक्त फिल्म नगर्ने भइन । त्यसपछि फिल्म ‘लिलिबिली’की अभिनेत्री जसिता गुरुङ सो फिल्मकी अभिनेत्री हुने खबर बाहिरियो भने यो फिल्ममा अनुबन्धित भएका अभिनेता प्रदिप ‘भैरवी’बाट बाहिरिने खबर अहिले चर्चामा रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार,प्रदिपले उक्त फिल्म साइन गरे पछि हालै कुनै पनि अन्य फिल्ममा अनुबन्धित नहुने भनिएको थियो तर, उनी हालै फिल्म ‘लभ स्टेशन’ का लागि पनि अनुबन्धित भएका छन् । जसको कारण उनि उक्त फिल्मबाट बाहिरिने सम्भावना प्रवल रहेको हो ।
फिल्म ‘भैरवी’ साइन गर्दा उनले एडभान्स स्वरुप ५ लाख लिएका छन् । ‘भैरवी’निर्माता भएको सम्झौता अनुसार उनले ‘रोज’ पछि ‘भैरवी’ गर्ने उल्लेख छ । तर प्रदिपले भने ‘लभ स्टेसन’ पछि उक्त फिल्म गर्ने बताउछन् । अब उक्त फिल्ममा प्रदीप यथावत रहन्छन् वा रहँदैनन् ? त्यसका लागि भने अब केहि समय कुर्ने पर्ने हुन्छ ।